Wararka Maanta: Sabti, Aug 11, 2012-Madaxweynaha DKMG Soomaaliya oo Bilad Abaalmarin ah siiyay hay'ad Turki ah oo ka howlagasha Magaalada Muqdisho
Shariif Sheekh ayaa hay'addan ku amaanay dadaal badan oo ku bixisay sidii ay u caawin lahayd shacabka Soomaaliyeed tan iyo sannadkii hore, markaasoo ay dalka ku dhufteen abaaro sababay macluul ayna dad badan u dhigeen.
"Hay'adda samafalka ee Kisme Yok Mu waxay dalka timid xilli ku habboon oo baahi weyn aan u qabnay," ayuu yiri madaxweyne Shariif oo sheegay in sidoo kale ay hay'adaha kale ee Turkigu iyaguna muujiyeen dadaal dheeraad ah.
Sannadkii hore ayaa waxaa Muqdisho soo gaaray hay'ado fara badan oo ka socda dalka Turkiga, kuwaasoo u yimid sidii ay gacan u siin lahaayeen dad fara badan oo ay abaaruhu kasoo barakiciyeen deegaannadooda kuwaasoo ku jiray xeryo ku yaalla Muqdisho.
Abaalmarinta oo la guddoonsiiyay madaxa hay'adda Kisme Yok Mu, Orhan Erdogan ayaa waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya Jimcihii shalay, iyadoo ay halkaas ku sugnaayeen qaar ka mid ah howl-wadeennada hay'adda.
Hay'addan oo muddo hal sano ah ka shaqeynaysay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa waxay furtay laba iskuul, iyadoo sidoo kale 600 arday Soomaaliyeed ah ugu qaaday dalka Turkiga waxbarasho iyo inay ku caawisay shacabka Soomaaliyeed gargaar kala duwan.